"Fantastic Beasts 2" ရဲ့ Trailer မှာ အမှတ်မထင်မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ Soo Hyun (Claudia Kim) - MoviesFan
“Fantastic Beasts 2” ရဲ့ Trailer မှာ အမှတ်မထင်မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ Soo Hyun (Claudia Kim)
မတ်လ၁၄ရက်နေ့မှာ အားလုံးစောင့်စားနေကြတဲ့ `Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald´ ရဲ့ Trailer ကို released လုပ်ခဲ့ထားတာကြည့်ပြီးသွားကြပြီလား??? Kpop Fan တွေ အနေနဲ့ ဒီ Trailer ကိုကြည့်မိတယ်ဆိုရင် ထူးထူးခြားခြားတွေ့မိတာလေးတွေများရှိကြပါသလား??
ဟုတ်ကဲ့ သတိထားမိမယ်ဆိုရင်တော့ `Claudia Kim´ လို့နာမည်ကြီးကျော်ကြားအောင်မြင်နေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး Soo Hyun ကိုအမှတ်မထင်တွေ့မြင်လိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ Soo Hyun က Maledictus တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာကို သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ Soo Hyun ဟာ`Credence Barebone´ အဖြစ်နဲ့သရုပ်ဆောင်ထားတဲ မင်းသား `EZra Miller´ ရဲ့ ပြိုင်ဘက်ရန်သူတစ်ယောက်ဇာတ်ရုပ်နေရာမှာ ပါဝင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
one of my favorites from the new #physiogel #campaign #피지오겔 x #수현 💋
A post shared by C L A U D I A 수현 (@claudiashkim) on Nov 24, 2017 at 12:27pm PST
Kpop လောကမှာ နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်အတော်များများက ဟောလီးဝုဒ်လိုနေရာမျိုးမှာ သရုပ်ဆောင်ဖို့ကမ်းလှမ်းခံနေရတဲ့ အချိန်တွေရောက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Soo Hyun က `International Film´ တွေဖြစ်တဲ့ `Avengers: Age Of Ultron´, `Marco Polo´, `The Dark Tower´ စသည့် ရုပ်ရှင်တွေမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ယခု `Fantastic Beasts 2´ မှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် ကမ်းလှမ်းခံထားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ `Fantastic Beasts: The Crime Of Grindelwald´ ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးကတော့ Fantasy Drama ရုပ်ရှင်အဖြစ်နဲ့ `Heyday Films´ မှနေပြီးထုတ်လွှင့်မယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်လေးကိုရိုက်ကူးတဲ့သူကတော့ `David Yate´ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
처음 엿보는 #신비한동물사전2 #그린델왈드의범죄 ..#11월16일 기다려지네요. 기대해주세요! Get your #WandsReady. #FantasticBeasts: The Crimes of Grindelwald arrives in theaters November 16.
A post shared by C L A U D I A 수현 (@claudiashkim) on Mar 13, 2018 at 9:46am PDT
`Fantastic Beasts: The Crime Of Grindelwald´ ရုပ်ရှင်ကားကြီးကို ၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ရက်နေ့မှာ UK နဲ့ US နေရာတို့မှာထုတ်လွှင့်ပြသမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာမှာလည်း တပြိုင်တည်းပြသပါစေလို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်…
Fantastic Beasts ဇာတ်ကား Trailer အကြောင်းအသေးစိတ်ကို ဒီမှာ ဖတ်လို့ရပါတယ်နော်။
Previous Post: Tomb Raider ရဲ့ Lara Croft ဇာတ်ရုပ်အတွက် အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်ခဲ့ရတဲ့ Alicia Vicander
Next Post: ပညာသားပါတဲ့ ပျက်လုံးလေးတွေနဲ့ သင့်ကိုရယ်မောစေမယ့် ‘The Death of Stalin’: Review